काल बन्दै क्वारेन्टिन
सुदूरपश्चिमका क्वारेन्टिन काल बन्न थालेका छन्। खाने, बस्ने र सुत्ने व्यवस्था राम्रो छैन। त्यसमाथि उपचारै नपाएर मानिस मर्न थालेका छन्। पछिल्ला दुई हप्तामा छ जनाको क्वारेन्टिनमा ज्यान गएको छ।
घटना १ः बाजुरा जिल्ला अस्पतालमा कोरोनाका कारण अघिल्लो आइतबार बिहान दुई वर्षकी बालिकाको ज्यान गयो। ती बालिक आमाबुबासँग भारतको मुम्बईबाट जेठ १३ मा गौरीफन्टा नाकाबाट नेपाल प्रवेश गरेकी थिई। गौरीफन्टाको सीमानाका खुलेपछि जेठ १३ मा ५ हजारभन्दा बढी नेपाली स्वदेश फर्किएका थिए। उकुसमुकुस भएर आएको त्यो भीडमा रहेकी बालिकाका बुबा कोरोना नेगेटिभ र आमा पोजिटिभ देखिएकी छिन्। भारतमा लकडाउनको अवधिभरि सुरक्षित बसेकाहरू पनि प्रचण्ड गर्मीमा यसरी हूल बाँधेर नेपाल प्रवेश गरिरहेका छन्। जेठ १४ गते बाजुरा पुगेर क्वारेन्टिनमा बसेकी ती बालिका र आमालाई रातिदेखि ज्वरो आउने, खोकी लाग्ने र पखाला चल्ने भएपछि उनीहरूलाई जिल्ला अस्पतालको आइसोलेसन कक्षमा सारिएको थियो। तर, बालिकाको भोलिपल्ट बिहान अस्पतालमा मृत्यु भएको थियो।
घटना २ः डडेल्धुराको सदरमुकाममै रहेको डडेल्धुरा बहुमुखी क्याम्पसको क्वारेन्टिनमा राखिएका एक बालकको पनि गत शनिबार मृत्यु भयो। नवदुर्गा गाउँपालिका–३ का साढे छ वर्षीय बालकको क्वारेन्टिनमै मृत्यु भयो। नजिकै रहेको क्वारेन्टिनबाट अस्पताल नपु¥याउँदै उनको ज्यान गएको हो। उनी पनि आमाबाबुसँगै भारतको मुम्बईबाट डडेल्धुरा पुगेका थिए। उनको स्वाबको परीक्षण रिपोर्ट भने नेगेटिभ आएको छ।
घटना ३ः बैतडीमा क्वारेन्टिनमा बसेकी एक महिलाको पनि गत हप्ताको मंगलबार मृत्यु भयो। पुर्चांैडी नगरपालिका–४ भटनास्थित मालिका माध्यमिक विद्यालयको क्वारेन्टिनमा बसेकी भटनाकै २२ वर्षीया सुनीता लुहारको मंगलबार बिहान मृत्यु भएको हो। मृतक लुहार मुटुरोगी रहेको भटना स्वास्थ्यचौकी इन्चार्ज रोहितकुमार धानुकले बताए। लुहारको अवस्था सामान्य रहे पनि मंगलबार बिहानै मृत्यु भएको उनले बताए। लुहार जेठ १६ गते गौरीफन्टा नाकाबाट स्वदेश फर्किएकी थिइन्।
घट्ना ४ः शनिबार बैतडीको पाटन नगरपालिका–६, भीमदत्त प्राविधिक शिक्षालयको क्वारेन्टिनमा रहेका एक जनाको मृत्यु भयो। पाटन नगरपालिका–६ सन्तोली घर भएका ३१ वर्षीय पुरुषको ज्यान गएको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पाटनका हेल्थ असिस्टेन्ट प्रेमसागर भट्टले बताए। शनिबार बिहान मात्रै भारतको बेंगलोरबाट पाटन आइपुगेका ती व्यक्ति क्वारेन्टिनमा बसेका थिए।
घटना ५ः आइतबार बिहान डोटीको केआईसिंह गाउँपालिका–३, सताराम आधारभूत विद्यालयमा रहेको क्वारेन्टिनमा बस्दै आएका १९ वर्षीय युवाको मृत्यु भयो। केआईसिंह गाउँपालिका वडा नं. ३ दल्ल घर भएका उनको बिहान ३ बजे मृत्यु भएको गाउँपालिकाका स्वास्थ्य संयोजक तिलबहादुर बोहराले जानकारी दिए। उनी लामो समयदेखि मुटुको रोगी भएको बोहराले बताए। भारतको दिल्लीबाट उनी जेठ २० गते आएर क्वारेन्टिनमा बस्दै आएका थिए।
घटना ६ः डडेल्धुरामै जेठ २१ मा पनि गन्यापधुरा गाउँपालिका १ असिग्राम आधारभूत विद्यालय रौनाकोट क्वारेन्टिनमा बसेकी ३० वर्षीया महिलाको मृत्यु भएको थियो। उनी श्रीमान्सँग जेठ १६ गते भारतबाट आएकी थिइन्।
घटना ७ः जेठ २३ गते धनगढीकी एक महिलामा दाहसंस्कारपछि कोरोना पुष्टि भयो। धनगढी उप–महानगरपालिका, उत्तरबेहडीकी ५६ वर्षीया महिलामा दाहसंस्कारपछि कोरोना पुष्टि भएको हो। शुक्रबार दिउँसो ११ बजे सेती प्रादेशिक अस्पतालमा डायलाइसिस गराउने क्रममा मृत्यु भएकी ती महिलाको आरडीटी रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि आफन्तले धनगढीको मोहना घाटमा शुक्रबार नै अन्त्येष्टि गरेका थिए। पछिल्लो एक महिनादेखि मिर्गौलारोगी ती महिलालाई शुक्रबार सेती प्रादेशिक अस्पतालको इमर्जेन्सी वार्डमा भर्ना गरिएको थियो। त्यहाँबाट तेस्रो तलामा रहेको डायलाइसिस कक्षमा लग्ने क्रममा उनको मृत्यु भएको हो। डायलाइसिस वार्डका मेडिकल अधिकृत डा. अरुणले पहिलो पटक डायलाइसिसका लागि ल्याइएकी ती महिलाको बेडमा राख्नेबित्तिकै मृत्यु भएको बताए।
क्वारेन्टिनमा कोराना परीक्षण नहुँदै अरू रोगका बिरामीले उपचार नपाउनु दुःखद भएको भन्दै प्रदेश र संघ सरकारको आलोचना हुन थालेको छ। वरिष्ठ फिजिसियन डा. शुभेषराज कायस्थ भन्छन्, ‘क्वारेन्टिनमा मान्छे मर्नु गम्भीर विषय हो। यसले कोरोनाको परीक्षण गति सुस्त रहेको देखाउँछ।’
संक्रमितको तथ्यांकअनुसार सुदूरपश्चिम चौथो नम्बरमा छ। सोमबारसम्म सुदूरपश्चिममा १ सय ४७ जना मात्रै संक्रमित पुष्टि भएको छ। तर, सामाजिक विकास मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार सोमबारसम्म सुदूरपश्चिममा ६४ हजार ७ सय १२ जना क्वारेन्टिनमा बसिरहेका छन्।
कोरोनाको जाँच नभएर एक महिनादेखि पनि मानिस क्वारेन्टिनमा बस्न बाध्य छन्। बैतडी शिवनाथ गाउँपालिका–१ का तीन जना क्वारेन्टिनमा बसेको २७ दिन पूरा भइसकेको छ। तर, पनि उनीहरूको क्वारेन्टिन बसाइ अझै टुंगिएको छैन। सुरुमा दुई हप्ता क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने भनेकाले आफूहरू स्वदेश फर्केलगत्तै क्वारेन्टिनमा बसेको भए पनि महिनादिनसम्म बस्नुपरेको उनीहरूले बताए।
आरडीटी रिपोर्ट पोजिटिभ देखिएका उनीहरूको पीसीआर रिपोर्ट नआएपछि उनीहरूलाई क्वारेन्टिनमै राख्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको शिवनाथ गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख नरेन्द्र महताले बताए। उनले भने, ‘तीन जनामा आरडीटी रिपोर्ट पोजिटिभ देखिएको थियो। तीमध्ये एक जनाको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ। दुई जनाको रिपोर्ट आउन बाँकी रहेकाले तीन जना २७ दिनदेखि क्वारेन्टिनमा बसिरहेका छन्।’ पीसीआर रिपोर्ट आउन ढिलाइ हुँदा क्वारेन्टिनमा बसेका नागरिकलाई समस्या भएको छ।
नयाँ निर्देशिकाले झन् त्रास
सरकारले कोरोना नियन्त्रणका लागि नयाँ निर्देशिका जारी गरेको छ। त्यसमा लक्षण नदेखिएका बिरामीलाई १४ दिन मात्रै स्वास्थ्य संस्थामा राख्ने र त्यसपछि पीसीआर पनि नगरेर घर पठाउने उल्लेख छ। यो निर्देशिकाले समुदायमा झन् त्रास फैलिएको छ। सरकारको नयाँ निर्देशिका आएपछि सेती प्रादेशिक अस्पतालले पनि बैतडीका चार र अछामका दुई गरी छ जना कोरोना संक्रमितलाई पीसीआर नगरीकनै घर पठाएको छ।
बैतडीको शिवनाथ गाउँपालिकाका–१ का २० वर्षीय र २७ वर्षीय पुरुष तथा शिवनाथ गाउँपालिका–२ का २० र २२ वर्षीय पुरुषलाई सेती प्रादेशिक अस्पतालले डिस्चार्ज गरेपछि, उनीहरूलाई होम आइसोलेसनमा राखिएको शिवनाथ गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख नरेन्द्र महताले बताए। ‘सेती प्रादेशिक अस्पतालबाट डिस्चार्ज गरिएका चारै जनालाई हामीले होम आइसोलेसनमा बस्न भनेर पठाएका छौँ,’ उनले भने। जेठ २३ गते अस्पतालले निको नहुँदै घर पठाएका उनीहरू चारै जना जेठ २५ गते मात्रै घर पुगेका हुन्। शिवनाथ गाउँपालिकाले एम्बुलेन्स पठाएर संक्रमितलाई घर पु¥याएको हो। गौरीफन्टा नाका भएर भारतबाट फर्किएका उनीहरूमा यही जेठ १० गते कोरोना पुष्टि भएको थियो।
कोरोना संक्रमित निको नहुँदै घर पठाइएपछि स्थानीय बासिन्दामा त्रास बढेको छ। ‘शिवनाथ गाउँपालिकामा आरडीटी पोजिटिभ केस पनि धेरै देखिएका छन्,’ गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख नरेन्द्र महताले भने, ‘क्वारेन्टिन व्यवस्थापनमै समस्या छ। अहिले गाउँघरमा कोरोनाको निकै त्रास बढेको छ। संक्रमितहरूको स्वास्थ्य अवस्था राम्रो भए पनि उनीहरू कोरोना निको नहुँदै घर पठाइएपछि समुदायमा त्रास देखिएको छ।’
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आइतबारदेखि स्वाब संकलनको काम बन्द छ। प्रदेशभरि धनगढीको पशुरोग अन्वेषण कार्यालयमा रहेको प्रयोगशालाको परीक्षण क्षमता दैनिक बढीमा २ सय ५० नमुना भएकाले परीक्षण गर्न नसकिने भन्दै स्वाब संकलन बन्द गरिएको हो। आइतबारसम्म प्रयोगशालामा ११ नमुना संकलन भइसकेका थिए।
सुदूरपश्चिममा जेठको महिनामा सोमबारसम्म ८० हजार मानिस भारतबाट नेपाल भित्रिएका र तीमध्ये ६४ हजार ५ सय जना क्वारेन्टिनमा बसिरहेका छन्। यो बेलामा प्रदेश सरकारले धमाधम स्वाब संकलन गरी परीक्षणको दायरा बढाउनपर्ने हो, तर सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्वास्थ्य निर्देशनालयले पाँच दिनसम्मका लागि स्वाब संकलन नगर्न निर्देशन दिएको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्वास्थ्य निर्देशक डा. गुणराज अवस्थीले धनगढीमा रहेको पीसीआर मेसिनमा परीक्षणका लागि पाँच दिनभन्दा बढीका लागि नमुना रहेको बताए। ‘अरू प्रदेशमा तीन÷चार वटा प्रयोगशाला छन्, सुदूरपश्चिममा एउटा मात्रै छ,’ उनले भने, ‘अझ भारतबाट फर्किनेको संख्या यो प्रदेशमा सबैभन्दा बढी छ। बन्द गर्नुको विकल्प थिएन। हामीले पाँच दिनमा जम्मा भएका नमुना परीक्षण गर्ने र त्यसपछि मात्रै स्वाब संकलन गर्ने गरी तयारी गरेका छौँ।’
धनगढीमा, संघ सरकारले पठाएको एउटा पीसीआर मेसिनले राम्रो नतिजा नदिएको भन्दै सञ्चालन भएको हप्तादिनमै बन्द गरियो। त्यसपछि केन्द्रीय पशुरोग अन्वेषण प्रयोगशालाको मेसिन धनगढीमा जडान गरिएको हो।